ဆော်ဒီ က ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းတဲ့ ရိုနယ်ဒို ၊ ကံကြမ္မာတူကြတဲ့ မီလန် ညီနောင်တို့ ၊ အပြောင်းအရွှေ့ လှုပ်ခတ်သံတွေ နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
ယူဗင်တပ် တိုက်စစ်မှူးကြီး ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ဟာ ဆော်ဒီ အာရေဗျ ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်း ရဲ့ မြောက်များတဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု တစ်ခု ကို ငြင်းပယ် ခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဆော်ဒီ ဟာ သူတို့ရဲ့ ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်း မှာ ဝင်ရောက် ကြော်ငြာပေး ဖို့အတွက် တစ်နှစ် ယူရို ၆ သန်း ဝင်ငွေ ရရှိမယ့် စာချုပ် ကို ရိုနယ်ဒို ဆီ ကမ်းလှမ်း ခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် ပေါ်တူဂီသားကြီး ကတော့ ငြင်းဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယမန်နေ့ ညက ကစား သွားခဲ့တဲ့ အီတလီ စီးရီးအေ ပွဲစဉ် မှာတော့ မီလန် ၂ သင်း ဟာ သွင်းဂိုးတွေ ခမ်းခြောက် ခဲ့ ကြပါတယ် ။ အေစီ မီလန် ဟာ အိမ်ကွင်း မှာ အတ္တလန်တာ ကို ၃ ဂိုးပြတ် နဲ့ အရေးနိမ့် ခဲ့ပြီး အင်တာ မီလန် ကတော့ အဝေးကွင်းမှာ ဂိုးမရှိ သရေ ကျခဲ့ ပါတယ် ။
အေစီ မီလန်ဟာ ရှုံးပွဲ ကြုံခဲ့ရ ပေမယ့် စီးရီးအေ ရဲ့ ရာသီဝက် ချန်ပီယံ ဘွဲ့ ကို တော့ သိမ်းပိုက် သွားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် အသင်း ကလည်း နည်းပြကြီး ဇီဒန်း ကိုဗစ်ပိုး ကြောင့် မကြီးကြပ် နိုင်ခဲ့ ပေမယ့် အာလာဗက်စ် အသင်း ကို ၄ – ၁ ရလဒ် နဲ့ အနိုင် ကစားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီပွဲမှာ အီဒင် ဟာဇက် ခြေစွမ်းပြ ခဲ့ပြီး ချဲလ်ဆီး မှာ တုန်းက လို ပုံစံကို ပြန်မြင်တွေ့ ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဖီဖာ နဲ့ UEFA တို့ က ပြင်းပြင်း ထန်ထန် သတိပေး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် အပြီး မှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ ဥရောပ စူပါလိဂ် ပြိုင်ပွဲ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေ ကို ဆက်လက် ကြိုးစားဖို့ အစီအစဉ် မရှိ တော့ဘူးလို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
လီဗာပူး နဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တို့ ဟာ လာမယ့် နွေရာသီ မှာ လိုက်ပ်ဇစ် ခံစစ်မှူး အူပါမီကာနို ကို အပြိုင် ကြိုးစား ကြဖွယ် ရှိတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ ပြင်သစ် နောက်ခံလူ ဟာ စာချုပ် အရ လာမယ့် နွေရာသီ မှာ ပေါင် ၃၈ သန်း နဲ့ စာချုပ် ဖျက်သိမ်းခွင့် ရှိနေသူ ဖြစ်ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အလန် ရှီးယား ကတော့ FA Cup မှာ ခြေစွမ်းပြ ကစား သွားတဲ့ မန်စီးတီး လူငယ်လေး ဖီးလ် ဖိုဒန် ဟာ ပေါလ်စခိုး နဲ့ ဂတ်စ်ကွိုင်နီ တို့ ရဲ့ လူငယ် ကစား သမား ဘ၀ ကို ပြန်ပြီး အမှတ် ရမိစေ ခဲ့တယ် လို့ ထုတ်ဖော် ချီးကျုး ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ စီးတီး နည်းပြကြီး ဂွာဒီယိုလာ ကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် အနေနဲ့ အရေ အတွက် ထက် အရည် အသွေးကို ပိုမို အလေးပေး သင့်ကြောင်း ပြောဆိုပြီး အသင်း ၂၀ ကို အရေအတွက် လျော့ချ သွားစေလိုကြောင်း ဆိုသွားခဲ့ ပါတယ် ။
တိုက်စစ်မှူးသစ် ရှာဖွေ နေတဲ့ ယူဗင်တပ် ဟာ ရိုးမား တိုက်စစ်မှူး အီဒင် ဒီဇစ်ကို နဲ့ ဆွေးနွေးနေပြီ လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ် နေပေမယ့် အသင်း အကြီးအကဲ မာရိုတာ ကတော့ ငြင်းဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ ကွင်းလယ်လူ ဂျက်ဆီ လင်ဂတ် ရဲ့ အနာဂါတ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယနေ့ ည ကစားမယ့် လီဗာပူး နဲ့ FA Cup ပွဲစဉ် အပြီးမှာ ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ် သွားမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အေစီ မီလန် ရှေ့တန်းလူ ရာဖေး လီယို ကတော့ သူ့ရဲ့ ရပ် သီချင်းခွေ ကို ဒီလ ကုန်ပိုင်း မှာ ဖြန့်ချီ သွားမယ် လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယမန်နေ့ ညက ကစား ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲကျန် မှာတော့ အက်စတွန် ဗီလာ အသင်း ဟာ နယူးကာဆယ် ကို အိမ်ကွင်း မှာ ၂ – ၀ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး အဆင့် ၈ နေရာကို တက်လှမ်း လာနိုင် ခဲ့တယ် လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . ။